बिदेशमा रहेकी नेपाली केटिको अरबी हजुर बुबा सँग हेर्न नै नसकिने भिडियो भयो भाईरल… (हेर्नुस् ) – PathivaraOnline
Home > रोचक > बिदेशमा रहेकी नेपाली केटिको अरबी हजुर बुबा सँग हेर्न नै नसकिने भिडियो भयो भाईरल… (हेर्नुस् )
बिदेशमा रहेकी नेपाली केटिको अरबी हजुर बुबा सँग हेर्न नै नसकिने भिडियो भयो भाईरल… (हेर्नुस् )
admin January 12, 2022 रोचक 0
सामाजिक संजाल मा हरेक दिन विभिन्न कुराहरु बाहिरिएका हुन्छन । जो कुनै भिडियो हरु त हामिले हाम्रो आफ्नै परिवार सँग बसेर हेर्न सकिँदैन । यस्ता भिडियो हरु धेरै भन्दा धेरैयुटुब र सोसल मिडिया फेसबुक मा देख्न सकिन्छ ।
अहिले हामिले जुन भिडियो प्राप्त गरि हालेका छौ । यो पनि हामिले युटुब एप मा जाँदा देखेर यस्लाइ जस्ट मनोरञ्जनको लागि मात्रै हालेका हौ । यस भिडियो हामिले यो कन्टेन भन्दा तल लिन ल्याएर राखेका छौ तँपाईहरुले तल गएर जस्ट त्यो देखाएको भिडियोमा किल्क गरि हेर्न सक्नुहुनेछ । हेर्नुहोस भिडियो हेर्न तल लिङ मा किल्क गर्नुहोला ।
छोटो पहिरनमा मलाइकाको यो जलवा, देखेर भए सबै फिदा बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोडा आफ्नो ग्ल्यामरस अन्दाज र बोल्ड लुकका लागि चिनिन्छिन् । यसपटक उनको सर्ट ड्रेस लुक भाइरस भएको छ । यस तस्विरलाई फ्यानहरुले निकै मन पराएका छन् । मलाइका सोशल मिडियामा निकै सक्रिय रहन्छिन् । यी अभिनेत्री आफ्नो फिटनेशको निकै ख्याल गर्छिन् । पछिल्ला दिन उनले आफ्नो फिटनेस फोटोज र भिडियोहरु शेयर गरिरहेकी छिन् । भिडियो हेर्न तल लिङ मा किल्क गर्नुहोला ।
यसपटक मलाइकाले एक हट फोटो सुटको तस्बिर साझा गरेकी छिन् । यो फोटोमा मलाइका सेतो सर्ट लगाएर सोफामा बसेको देखिन्छिन् । अभिनेत्रीले सेतो सर्टसँग म्याच हुने सेतो रंगको बुट्स लगाएकी छिन् । मलाइकाले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलबाट तीनवटा फोटो साझा गरेकी छिन् । मलाइकाले आफ्नी बहिनी अमृता अरोडको जन्मदिनका अवसरमा खिचेका फोटो सार्वज्निक गरेकी हुन् ।
बहिनी अमृताले नै यी फोटो खिचेकी हुन् । दिदी मलाइका र नजिककी साथी करिना कपूरसँग अमृताले ३१ जनवरीमा आफ्नो ४३ औं जन्मदिनको खुसीयाली मनाएकी थिइन् । मलाइका अरोरा आफ्ना ब्वाईफ्रेन्ड अर्जुन कपूरसँगको सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा रहन्छिन् । मलाइकाले २०१७ मा अरवाज खानसँग डिभोर्स गरेकी थिइन् । यो जोडीका एक छोरा अरहान खान १९ वर्षका भइसकेका छन् । भिडियो हेर्न तल लिङ मा किल्क गर्नुहोला ।
उपत्यकामा आजबाट स्मार्ट लकडाउन : आजबाट के-के गर्न पाइने र नपाइने ?
कठै! १९ वर्षको युवकसंग ५१ वर्षकि आमा भा’गेपछि हजुरबुबा रु दै आए मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
यी महिलालाई जाँडरक्सी नखाने इमान्दार वर चाहियो, यसरी सिधैं सम्पर्क गर्नुहोस्
अनौठो समाचार: कार्यालयमा प्रेम, विवाह अनि ७२ घन्टापछि….
१३० किलोकि सानुमायाकाे टिकटकमा भाइरल डान्स, जिउ मोटो भएपनि डान्स खत्रै गर्छिन (भिडियो हेर्नुस्)